Ouassa Lou Serena oo ku guuleysatay koobka Qaramada Afrika
ACCUEIL » COMPANY »Xulka Ivory Coast XIUMX: Ouassa Lou Serena oo ku guuleysatay koobka Qaramada Afrika ee Korhogo
Poro weli lahayn wax taaj oo qaran, oo inta badan ku guuldareysteen aad u yar finals grand qaranka la kaalinta labaad badan oo ay. Oo sannadkan, ka dib logu musharax 12 rogto on the "T", xeerbeegtida si ay u sameeyaan labada Poro si tartan weyn 1er June ee Abidjan doortay Ouassa Miss Lou Serena iyo Bakayoko Alexise. Waxaa loo arkay Boqorad caleemo saaray iyo kaalinta koowaad ee dhamaadka marxaladda ceshadka iyo 11ème Miss presets Ivory Coast on Saturday, April 20 xarun dhaqan ka Womiengnon ee Korhogo. In tartan saaro sida gacmo kale gobolka waa ardayga 22 sano 2 liisan, khayraadka aadanaha iyo isgaarsiinta ee Pigier Ouassa Miss Lou Serena ayaa sidaas daraaddeed Dafi taajkii iyo qaadeen safaleeti ku-awaalka Miss Poro 2019 , horay uga mid ah 11 musharaxiinta kale.
Sidoo kale akhri: Mike Alabi: "Asal ahaan, waxaan ahay xishood iyo kali, waxaan door ku leeyahay wax kasta oo aan sameeyo"
Dhamaan tartanka, waxay ahayd mid aad u qurux badan oo marxaladdana ku raaxeystay. tiara The, waxyoonay by bouquet a of daffodils la saaray timaheeda by 1ère Dauphine Poro 2018 Ouehé Miss Stephanie. Ogsoonow in orodyahanka ugu horeysay Poro 2019, Miss Bakayoko Alexise waa sannadood 18 jir 3 liisanka ardayga Isbaanish si Felix Houphouet Boigny University of Cocody. Aly Ouattara, wakiilka macalinka sare ee xafladda Ra'iisul Wasaaraha Amadou Gon Coulibaly ayaa qarsoon dhulka la dhigin ee gobolka Poro ee finalka qaranka.
"Waxaan u maleynayaa in labadan ciyaaryahan ay rajo weyn ka qabaan finalka weyn", ayuu yidhi. dhamaystirka sugayo ee presets gobolka Saturday 27 April ee San Pedro ee low-Sassandra, caravan Miss Cote d'Ivoire ayaa hore u soo booqday kow iyo toban gobol oo dalka ka in ay ku qanacsan weyn ee dadweynaha, qabanqaabiyayaasha, wada-hawlgalayaasha iyo maal leh ee horay loogu sii qaaday MTN Ivory Coast.